Amerika Latina: Antso Ho An’ny Fandriampahalemana Ao Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2017 12:29 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra tamin'ny Janoary 2009)
Pikantsarin'i Daquella Manera nampiasàna lisansa Creative Commons.
Misy feo maneho ny firaisankinany amin'ny mponin'i Gaza re nanerana an'i Amerika Latina. Maro ireo bilaogera avy any Amerika Latina no namoaka ny hadisoam-panantenany, sy ny fanantenany hisian'ny fandriampahalemana ao amin'io faritra io. Fa nahatsapa izy ireo ankehitriny fa tena mbola ho ela vao hisy izany fandriampahalemana izany ao amin'ny faritra Afovoany Atsinanana taorian'ireny daroka baomba ireny.
Nanoratra i Voces [en espagnol] avy any Kiobà hoe:
Vaovao miresaka daroka baomba toy ny efa mahazatra ihany no namarana ny taona 2008 tao Gaza. Toy ny hoe azo atao ery ny mifehy ny fahatairana, ny hatezerana sy ny tsy fahafahana manao na inona na inona, ary ny haromontana mivangongo manoloana ireo fatin'olona, sy ny hakivian'ireo mpitsabo satria tsy hitan'izy ireo izay atao hanamaivanana ny hirifirin'ny ferin'ireo maratra izayfery misokatra, ary koa ny rà very. Manao antso avo ho an'ny fandriampahalemana ao Palestina aho, mangataka ny hisian'ny filaminana sy ny fanantenana, misaona aho mandritra ireo fety rehetra ankalazaina eto ambonin'ity tany tsy dia misy zavatra tokony ho ankalazaina ity. Manao antso avo ho an'ny fandriampahalemana ao Palestina aho… ny fandriampahalemana… ny fandriampahalemana… ny fandriampahalemana… NY FANDRIAMPAHALEMANA… NY FANDRIAMPAHALEMANA… NY FANDRIAMPAHALEMANA… NY FANDRIAMPAHALEMANA !!! Ndraso ho jerentsika raha misy mihaino isika…
Namoaka ny ahiahiny i Giorgio Trucchi tao amin'ny Barricada [en espagnol], bilaogy iray hikambanan'ny be sy ny maro ao Nikaragoa, mikasika ireo karazana fiangarana ataon'ny vondrona iraisam-pirenena, ohatra amin'izany ny toa tsy fihetsehany ho an'i Palestina sy ny vondrona Eoropeana ary Etazonia kanefa vetivety kely dia nivoaka ny sazy efain'i Nikaragoa :
Toa hita tsy manana fahefana hanao na inona na inona akory ny vondrona iraisam-pirenena manoloana ny zava-mitranga, ary azo lazaina fa io no fiafarana henjana sy ratsy indrindra ho an'ny vahoaka Palestiniana. Hatramin'izao dia tsy mbola hitantsika io hafanàmpo io, izay miseho amin'ny alalan'ny toe-javatra maro hafa, hitakiana amin'ny hery rehetra ny fanajàna ny zon'ny maha-olombelona izay efa napetraka hatry ny ela. Tsy hita intsony ny faharesen-dàhatra nisy taloha ankoatran'ireo izay voalazan'i Vondrona Eropeanina sy Etazonia tamin'ny herinandro maro lasa mamely an'i Nikaragoa, miaraka amin'ny fangiazana ny vola sy tetikasa maro, ary ny vahaolana avy amin'ireo parlemantera mpikambana ao amin'ny Kaongresy, dia mampitaha azy io amin'ireo toedraharaha mahazendana iainan'ny vahoaka Palestiniana ao Gaza.
Nilaza ny eritreriny mikasika ny zava-niseho tao Gaza i Susana Villarán [espaniola] avy any Pero ary nanamafy izy fa mbola misy olana maro hafa ao Palestina fa tsy resaka disadisa mitam-piadiana fotsiny ihany, toy ny tsy fahampian'ny fiarovana ny olon-tsotra sy ny tsimatimanota :
Ny tsimatimanota no tambin'ny tsy fitandremana nataon'ny tafika Israeliàna mitàm-piadiana : volana iray talohan'io fanafihana io, namoaka tatitra momba io lohahevitra io ny Yesh Din, fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakàna, mpiaro zon'olombelona. Raha araka ny filazan'izy ireo, teo anelanelan'ny taona 2001 sy 2007, dia Palestiniàna olontsotra manodidina ny 2000 teo no namoy ny ainy teo am-pelantanan'ny tafika Israelianina. Kanefa tamin'ireo olona 2000 namoy ny ainy ireo, dia 78 fotsiny no nampiasaina hanenjehana an'ireo miaramila Israeliana ireo, ary 5 tamin'ireo ihany koa no nosaziana. Ary na tamin'ireny trangan-javatra ireny aza, dia tena tsy nisy dikany ny sazin'izy ireo raha oharina amin'ny voalazan'ny lalàna Israeliàna.
Manontany tena i Morsa avy any Però hoe tena ilaina tokoa ve ilay mandaroka baomba any amin'ny anjerimanontolo, ary miantso ireo mpamakyazy izy mba hihetsika hanohitra ny ady, sady mampitandrina ihany izy hoe tsy holeferina mihitsy ny fankahalana jiosy ao amin'ny bilaoginy :
Mbola mitohy hatrany ny fiainana tsy mifaditrovana ao Gaza. Ary mba tsy hisian'ny ahiahy ny amin'ny hoe tsy nanavahna mihitsy ilay fanafihana (na koa hoe nanavahan'ireo tafika), nodarohana baomba ihany koa ny anjerimanontolo islamikan'i Silamo tao Gaza. Ny fialantsiny dia hoe nisy mahery fihetsika tao amin'io toeram-pampianarana io, kanefa dia lainga izany, araka ny fanamafisan'i Akram Habeeb, mpampianatra literatiora, ary nahazo vatsim-pianarana Fulbright, tao amin'io anjerimanontolo io).
Nizara ny fomba fijeriny mikasika io toe-javatra manahirana io i Alta Hora de la Noche avy any Salvador
Olana sarotra vahàna izy ity, ary tsy ho vitako ny manazava azy anatin'ny andalana vitsivitsy. Kanefa tsy afaka ny hiteny mihitsy aho hoe tsy mandona ny foko ny fomba tsy mifaditrovana, na hoe tsy mahatsapa na inona na inona ny foko raha mahita fa mbola ela vao hahita vahaolana amin'ireo olana miseho ao amin'ny tany hitoerako.
Farany, maro tamin'ireo nahita fianarana no nanao sonia antso iray ho an'ny be sy ny maro tao Shily ho fanoherana ireo fanafihana, ho mariky ny firaisankina amin'ny vahoaka Palestiniàna, izay mety ho hitantsika any anaty bilaogy maro samihafa any, ohatra amin'izany “Poesia para Alentar Coraje” (Poezia ho fankaherezana ny fahasahiana).